2 flutes kubad sanka kubad dhamaadka dhagaxshiidka
Carbide 2-daab End Mill Tu ...
Single-gees darafkii dhamaadka biibiile ...
Birta Tungsten oo laba af leh ...
Qaab: Nooca madaxa kubbadda.
Tirada dhuunta: 2 biibiile.
Daahan: (AI, Ti, Cr) N-nooca dahaarka badan leh.
Waxaa soo saaray mashiinka saxda ah ee heerka koowaad ee ajnabiga ah, kubbadda dhammaadka sanka kubbadu waxay shiidi kartaa xagal qalooca qalooca ah, naqshadda dhexroorka weyn ee weyn waxay hagaajineysaa adkaysiga iyo iska-caabbinta naxdinta leh. Oo meesha weyn ee ka -qaadista chip -ka ma fududa in la ururiyo jab, jeex mindida.
Waa af fiiqan oo adkaysi u leh, jajabka ayaa si habsami leh loo gooyaa, iyo hufnaanta wax-qodista ayaa la hagaajiyaa.
Nooca Dusha sanka kubbada
Qalabka shaqada Birta caadiga ah / birta adag ee adag ～ HRC55 / birta aan birta lahayn / birta kabka / titanium / copper
Lambarka Flutes 2
Daahan La habeeyay
Dhererka biibiilaha 2-24
Dhexroorka Shank (d) (mm) 4-12
Dhererka buunshaha 2-24
Dahaarka titanium nitride (AlTiN ama TiAlN) ayaa siibasho ku filan si ay uga caawiso sii wadida jajabyada, gaar ahaan haddii aadan isticmaaleyn qaboojiye. Dahaarkaan waxaa badanaa loo adeegsadaa qalabaynta carbide -ka.
2.Haddii aad isticmaalayso qalab bir ah oo xawaare sare leh (HSS), raadi jaakadaha sida titanium carbo-nitride (TiCN). Habkaas ayaad ku heleysaa subagga loo baahan yahay aluminium, laakiin waxaad ku qarashgareyn kartaa lacag kaash ka yar tan carbide -ka.
Ballaca Ballaca D1 Dhererka Flute L1 Shank diamd Dhererka L
Soo saaraha baabuurka
Hore: Ku habboon adkaynta sare ee 3-foorida kubbadda sanka wax lagu gooyo
Xiga: HRC 65 birta tungsten birta laba-afarta ah ee kubbadda wax-goynta R
2-Sanka Kubbadda Futada Dhamaadka Dhamaadka Dhamaadka leh Dahaarka
sanka kubbadda dhagaxa dhammaadka
Sanka Kubadda Dhamaad Milliyaha Jarista
Kubadda Miin -Gooyuhu
HRC55 carbide tungsten kubad axdi qarameedka
HRC55 Aluminium Work gabal carbide sanka ro ...
HRC 65 birta tungsten birta laba af leh ee millin dhamaadka kubbadda ...
Habboon for-rigidity sare 3-biibiile sanka mi ...
HRC 55 2-Futada Kubadda Dhabarka Dhamaadka Dhamaadka leh Dahaarka
Tungsten Carbide CNC Machine Processing axdi qarameedka ...